ကြယ်စင်သခင်မော်ကွန်းတိုက် - Brick Fanatics
30 / 08 / 2021 30 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 289 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Gamora, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, က Galaxy ၏အုပ်ထိန်းသူများ, Lego, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Marvel, သေးသေးလေး, စတား-သခင်ဘုရား, Thanos, T'Challa စတား - Lord, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
29 / 08 / 2021 29 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 266 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Black က Panther, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, ဒိုမီလာဂျေ, Kraglin, Lego, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Marvel, အသေးစား, သေးသေးလေး, Nebula, စတား-သခင်ဘုရား, မျက်နှာစာ, Thanos, T'Challa စတား - Lord, Wakanda, Yondu
18 / 08 / 2021 19 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 210 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, ၇၁၇၄၁ Ninjago City ဥယျာဉ်, 76020 Knowhere Escape မစ်ရှင်, 76079 Ravager တိုက်ခိုက်မှု, 76080, 76080 Ayesha ရဲ့လက်စားချေ, 76131 သေစားသေစေသော Compound တိုက်ပွဲ, 76192 Avengers: နောက်ဆုံးစစ်ပွဲ, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, အုတ်ခဲ, နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, အုပ်ထိန်းသူများ, က Galaxy ၏အုပ်ထိန်းသူများ, က Galaxy Vol ၏အုပ်ထိန်းသူများ။ 2, Heist, Lego, Lego Avengers Endgame, Lego မှ marvel, Marvel, Nebula, Peter Quill, စတား-သခင်ဘုရား, မျက်နှာစာ, Thanos, T'Challa စတား - Lord, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, Yondu
01 / 08 / 2021 01 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 404 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76131 သေစားသေစေသော Compound တိုက်ပွဲ, 76193 အဆိုပါအုပ်ထိန်းသူများ '' သင်္ဘော, စုဆောင်း Minifigures, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney, Disney+, က Galaxy ၏အုပ်ထိန်းသူများ, Lego, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Marvel, marvel ဒဏ္ဍာရီ, သေးသေးလေး, Nebula, ကြယ်စင်သခင်, စတား-သခင်ဘုရား, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
27 / 07 / 2021 03 / 08 / 2021 Matthew O'Shea 609 Views စာ 1 မှတ်ချက် 75978 ထောင့်ဖြတ် Alley, 76107 Thanos Ultimate စစ်တိုက်, 76193 အဆိုပါအုပ်ထိန်းသူများ '' သင်္ဘော, Avengers, ချစ်သူ, Drax, Gamora, Groot, က Galaxy ၏အုပ်ထိန်းသူများ, ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego မှ marvel, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Lego Star Wars, mantissa, Marvel, Nebula, reviews, ဒုံးပျံ raccoon, Star Wars, စတား-သခင်ဘုရား, အဆိုပါ Benatar, အဆိုပါ LEGO Group, Thor, တိုနီ Stark, UCS, Ultimate စုဆောင်းစီးရီး
28 / 05 / 2021 28 / 05 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 346 Views စာ0မှတ်ချက် 76193 အဆိုပါအုပ်ထိန်းသူများ '' သင်္ဘော, Avengers: The Infinity Saga, နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, ပထမဦးစွာမျှော်, Groot, Infinity Saga, Lego, Lego မှ marvel, Marvel, ဒုံးပျံ raccoon, စတား-သခင်ဘုရား, နွေရာသီ, နွေရာသီ 2021, အဆိုပါ Infinity Saga
19 / 05 / 2021 19 / 05 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 1137 Views စာ0မှတ်ချက် 76186 အနက်ရောင် Panther နဂါး Flyer, 76189 Captain America နှင့် Hydra Face-Off, ၇၆၁၉၀ Iron Man: Iron Monger Mayhem, ၇၆၁၉၁ Infinity Gauntlet, 76192 Avengers: နောက်ဆုံးစစ်ပွဲ, 76193 အဆိုပါ Benatar, 76193 အဆိုပါအုပ်ထိန်းသူများ '' သင်္ဘော, ပုရွက်ဆိတ်-Man, Avengers, Avengers: Ultron ၏ခေတ်, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, Black က Panther, Captain America, Groot, သံမဏိလူသား, Lego, Lego မှ marvel, mantissa, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, MCU, ဒုံးပျံ raccoon, Scarlet စုန်းမ, Shuri, စတား-သခင်ဘုရား, နွေရာသီ, နွေရာသီ 2021, Thanos, Thor
14 / 05 / 2021 14 / 05 / 2021 ခရစ် Wharfe 931 Views စာ0မှတ်ချက် 76107 Thanos Ultimate စစ်တိုက်, 76186 အနက်ရောင် Panther နဂါး Flyer, 76189 Captain America နှင့် Hydra Face-Off, ၇၆၁၉၀ Iron Man: Iron Monger Mayhem, ၇၆၁၉၁ Infinity Gauntlet, 76192 Avengers: နောက်ဆုံးစစ်ပွဲ, 76193 အဆိုပါအုပ်ထိန်းသူများ '' သင်္ဘော, အမေဇုံ, ပုရွက်ဆိတ်-Man, Avengers: The Infinity Saga, Black က Panther, Captain America, Groot, Hydra အေးဂျင့်, Infinity Saga, သံမဏိလူသား, Lego, Lego မှ marvel, mantissa, Marvel, သြဗဒိသည်စတန်, ငရုတ်ကောင်း, ဒုံးပျံ raccoon, Scarlet စုန်းမ, Shuri, စတား-သခင်ဘုရား, Thanos, အဆိုပါ Infinity Saga